Zvese zvaunoda kuti uzive nezvekuuya kweHBO Max muSpain | Gadget Nhau
Miguel Hernandez | 09/09/2021 13:07 | Mafirimu uye akateedzana, Musha
HBO Izvo zvave zviri mumusika wekutepfenyura audiovisual zvemukati zvinopa kwenguva yakareba, kunyanya ichipa ayo anodikanwa kwazvo ma franchise. Nekudaro, pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vashandisi vatize sevhisi kuSpain nekuda kwemhando yepasi yemufananidzo uye kushanda kwayo kwakashata, chimwe chinhu chinozopedzisira chave nhoroondo.
HBO inozivisa kuuya kuSpain kweiyo HBO Max sevhisi, tinokuratidza zvese zvirimo uye neshanduko dzaunofanirwa kufunga nezvadzo kunakidzwa nebasa. Tsvaga nesu kuti ungabatsirwa sei zvakanyanya neHBO Max uye uwane zvakazara papuratifomu negwara rekutsanangudza.
1 HBO Max uye kusvika kwake kuSpain
2 Zvakadii neyangu yazvino HBO kunyorera?
3 Shanduko nemitengo papuratifomu yeHBO Max
4 Chii chichava iyo HBO Max katalog muSpain?
HBO Max uye kusvika kwake kuSpain
Iyo HBO Max sevhisi yakashandiswa kwenguva yakati mune dzimwe nyika dzakaita seUnited States of America uye kune izvi vatove nazvo webhusaiti yako muSpain. Sezvakaziviswa neHBO pachayo, sevhisi inokupa iwe yakanakisa nyaya kubva Warner Bros., HBO, Max Mavambo, DC Comics, Cartoon Network uye zvimwe zvakawanda, pamwe chete kwenguva yekutanga (zvirinani kuSpain). Chinhu icho pasina mubvunzo chinokonzera kusahadzika pakati pevamwe vashandisi, asi usazvidya moyo, nekuti tauya kuzogadzirisa kusahadzika kwese kungangomuka.
Gadzirira kudanana neiyo nyowani yekumhanyisa chikuva iyo inogara muSpain musi waGumiguru 26 #HelloHBOMax pic.twitter.com/VwU0s9bawM
Chinhu chekutanga kuve pachena kuti mune anotevera Gumiguru 26 iwe unozokwanisa kunakirwa ese akajairwa HBO sekune zvimwe zvakasara zveWarnerMedia zvigadzirwa uye zvinotangisa papuratifomu imwe pasina kuita kontrakiti dzakasiyana kuburikidza neyakajairwa tambo terevhizheni vanopa seMovistar, pakati pevamwe.
Panguva imwecheteyo, HBO Max ichasvika kuSpain, Sweden, Denmark, Norway, Finland neAndorra uyu Gumiguru 26. Gare gare, kuwedzera kwacho kuchaenderera muPortugal, pakati pedzimwe nyika, kunyangwe iwo mazuva acho asati asimbiswa.
Zvakadii neyangu yazvino HBO kunyorera?
Muchidimbu, zvachose hapana chichaitika. HBO ichapa nguva yakatarwa yekugadzirisa, asi chaizvo izvo zvavachaita zvinonyangadza echinyakare HBO chikuva, icho vazhinji vachazotadza kuona nekunakidzwa, uye iyo data ichazongoerekana yabatanidzwa HBO Max. Izvi zvinoreva kuti:
Iwe unozokwanisa kupinda muHBO Max uine hunhu hwako hweHBO (vashandisi nemapassword)
Iyo data icha chengetwa, kuchengetedzwa uye zvirimo zvichaburitswa zvakare kwawakavasiya ivo
Muchidimbu, iwo chete Gumiguru 26 yako HBO account inozongo shandurudzwa kuita HBO Max account uye iwe uchave unokwanisa kunakirwa zvese zvemukati izvo izvo nyowani chikuva zvinokupa iwe.
Shanduko nemitengo papuratifomu yeHBO Max
HBO haina kusimbisa kana paizove nekusiyana pamutengo wakapihwa vashandisi, muchokwadi, kana sevhisi yaendeswa HBO kuenda kuHBO Max muUnited States of America uye muLATAM pakange pasina kuwedzera kwemutengo.
Muchokwadi, uchifunga nezvekuti HBO yatosimbisa kuti kuchinjiswa kwemaakaunzi neruzivo zvichazongoerekana zvaitika, Zvese zvinoratidza kuti hapazove nemusiyano mukunyorera. Zvakare, kana iwe ukatora mukana weHBO kuburikidza nekupihwa kunopihwa nekambani yako yefoni kana mupi webasaiti weInternet, hapana chinoshanduka nekuti magwaro ako anozotakura kubva papuratifomu kuenda kune imwe.
Chii chichava iyo HBO Max katalog muSpain?
Sezvaunenge uchitoziva, HBO chikamu cheWarner, saka, isu tinokwanisa kunakidzwa neiyi HBO katarogu mukuwedzera kune Cartoon Network, TBS, TNT, Yevakuru Swym, Iyo CW, DC Universe and the mafirimu yekambani pamwe nekambani dzayo dzinogadzira dzakadai seNew Line Cinema. Pasina kupokana, iyo catalog ichakura muhukuru uye mhando:
Iwo makuru ekuvharidzira, nyaya dzinotyisa kwazvo, uye zvekare zvisingakanganwiki izvo zvakatiita isu zvatiri. Zvese paHBO Max.
DC Zvese Franchise
Kuburitswa kwazvino kweWarner: Space Jam: Nyowani Ngano
Uye zvakare, ivo vane akateedzana emakodzero senge Shamwari, Iyo Big Bang Theory kana South Park yekunyatso kugadzirisa iyo katarogu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Musha » Mafirimu uye akateedzana » Zvese zvaunoda kuti uzive nezve kusvika kweHBO Max muSpain
RoboVac X80 uye HomeVac H30, itsva aspiration kubhejera kubva eufy